परिवर्तन संस्थागत गर्नु पर्छ : सामाजिक अगुवा । – सप्तरंगी एफ एम
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश बिरुद्ध दमक नगरपालीकाका कर्मचारी आन्दोलीत , भोली देखी नगरपालीका ठप्प पार्ने चेतावनी
भूटानी शरणार्थी शिविरमा अन्तराष्ट्रिय कराते टुर्नामेन्ट शुरु , पहिलो दिनको खेलमा आयोजक भूटान अग्रस्थानमा
दमक ५ मा निर्माणाधीन भृकटी सडक स्तरोन्नतीको काम समयमा सम्पन्न नभएको भन्दै स्थानीयहरु आन्दोलित , नगरकै नमुनाबाटो समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने नगर प्रमुख–उपप्रमुखको वाचा गफमै सिमित
पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ झापा क्षेत्र नम्बर ५ इकाइ समितिको अध्यक्षमा राजन खड्का चयन
अमेरीकामा डिल्ली अधिकारीलाई सोसियल हिरो अफ द ईयर, प्रधान, डिसि र महतलाई लाईफटाईम अचिभमेन्ट अवार्ड बाट सम्मान गरिने
शिवानी ताजपुरिया पहिलो मिस ताजपुरिया बिजयी
सीडी विजय अधिकारीलाई द भ्वाइस अफ नेपालको फाईनल बिजेता बनाउन अमेरीकामा रहेका भुट्नीज नेपालीहरुद्वारा अभियान सुरु
Home / ट्रेन्डिङ्ग / परिवर्तन संस्थागत गर्नु पर्छ : सामाजिक अगुवा ।
परिवर्तन संस्थागत गर्नु पर्छ : सामाजिक अगुवा ।
जेठ १५ दमक
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाको आज ११ बर्ष पुरा भएको छ । यहि सन्दर्भमा हामिले दमकका समाजिक अगुवाहरु संग गणतन्त्र स्थापनाको यतिका बर्षमा उपलब्धि के भयो जस्तो लागेको छ भनी सोधेका छौं के भन्छन् त यस क्षेत्रका सामाजिक अगुवाहरु ।
सोचे जति उपलब्धि नभए पनि नागरिकको चेतना बढेको छ : प्रकाश बुढाथोकी, सभापती नेपाल रेडक्रस सोसाईटी उपशाखा दमक ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको ११ बर्ष पुग्दा पनि नागरिकहरुले सोचेको जस्तो उपलब्धि हुन सकेको छैन । मुलुकले बिकाश निर्माणको फड्को मार्नु पर्ने हो तर त्यो हुन सकेको छैन । यो ११ बर्षमा मुलुकको राजनिति त भर्खर संस्थागत हुन लागीरहेको छ । बल्ला स्थायी सरकार पाएको छ मुलुकले । तर अन्य उपलब्धि नभए पनि गणतन्त्र स्थापना पछि भने नागरिकहरुको चेतान स्तरमा बृद्धि भएको छ । हिँजो दबिएर बसेर समुदायहरुले पनि अहिले अवसर पाएका छन् । यसलाई पनि उपलब्धिनै मान्नु पर्छ ।
हुन त गणतन्त्र आईसके पछि मुलुककै आमुल परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर राजनैतिक नेतृत्व अदुरदर्शि बन्दा हिँजोको समास्याहरु अभैm सम्म यथावत छन् । तथापी नगरिकहरुको चेतना स्तर बृद्धिलाई पनि ठुलै उपलब्धि मान्नु पर्छ । अब यसलाई संस्थागत गर्दै अगाडी बढ्नु पर्छ ।
युवाहरुमा राजनिति प्रति सकारात्मकता बढेको छ : चन्द्र खत्री, अध्यक्ष दमक जेसिज ।
गणतन्त्र स्थापनाको ११ बर्ष पुग्दा पनि जनताको अपेक्षा अनुसार काम भएको छैन । जुन जोस र जाँगरका साथ नागरिकहरु गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा लागेका थिए त्यो अनुसार नेतृत्वले काम गरेन । नेतृत्वले चाहेको भए मुलुकले यो ११ बर्षको अवधिमा अभैm ठुलो प्रगती गर्ने थियो । तर यो ११ बर्ष राजनितिक खिचातानिमै बित्यो । तर पनि अहिले युवाहरुमा पनि राजनिति प्रति सकारात्मक भावना बढेको छ । पहिलो राजनितिलाई फोहोरी खेल भन्ने युवाहरु अहिले मुलुक परिवर्तनको लागी राजनितिमा आकर्षण भएका छन् । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ ।
मुलुकको युव शक्ति अहिले पनि अवसर नपाएर बैदेशीक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । तिनलाई मुलुकमै रोजगारीको अवसर श्रिजना गर्नु पर्छ । अहिलेको युवाले राजनितिलाई सकारात्मक रुपमा हेरेको बेला नेतृत्वले राजनिति मार्पm मुलुकको बिकाश गर्न सकेन भने फेरी युवाहरुमा निराशा आउन सक्छ । त्यसैले युवा शक्तिलाई मुलुक निर्माणमा परिचालन गर्न नेतृत्वले कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ ।
मुलुकमा गणतन्त्र आए पनि पुरानो सोच कायमै : रेगिना भट्टराई, अध्यक्ष लायन्स क्लब अफ दमक सेवीका ।
मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउनको लागि समै बर्ग र समुदायको उत्तिकै योगदान रहेको छ । हिँजो एउटा बर्गको हातमा मात्रै मुलुकको शासन सक्ता थियो भने अहिले त्यो अवस्था छैन । गणतन्त्र आएर सबै बर्ग समुदाय समान भएको अवस्थामा पनि कतिपयमा भने हिँजोको एकात्मकबादी चिन्तन गएको छैन । मुलुकमा गणतन्त्र आए पनि हाम्रो हिँजोको सोच र चिन्तन नफेरीए सम्म सबै नागरिकले समानताको अनुभुती गर्न पाउँदैनन । कानुनले सबै समान भन्दा पनि अभैm पनि कतिपय ठाउँमा पुरुषबादी चिन्तनका कारण महिला अवसर पाउन बाट वन्चित गरिएका छन् । कानुनले बाध्य पारिएको वअस्था बाहेक अभैm पनि महिलालाई अवसर दिने कुरामा कन्जुस्याईं गरिन्छ ।
हामिले हाम्रो सोच र चिन्तनमा पनि गणतन्त्र ल्याउनु जरुरी रहेको छ । हिँजोको एकात्मकबादी सोचले गर्दा परिवर्तनको आभाष सबै तिर हुन सकेको छैन ।
व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको जिवनस्तर जहाँको तहिँ : भेषराज न्यौपाने, अध्यक्ष दमक पब्लिक लाईब्रेरी ।
मुलुकमा व्यवस्था त परिवर्तन भयो । सिमित मानिसहरुले यसको उपलब्धि पाए होला तर जनताको जिवन स्तर जहाँको तहिँ छ । जब सम्म जनताको जिवन स्तर परिवर्तन हुँदैन तब सम्म व्यवस्था परिवर्तनले खासै अर्थ राख्दैन । मुलुक र जनताको अवस्था हिँजो र आजमा खासै भिन्न अवस्थामा छैन । जब सम्म मुलुक र जनताले परिवर्तनको आभाष गर्न पाउँदैनन त्यो परिवर्तन भनेको सिमित व्यक्तिको लागी मात्रै हुन्छ । त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिँदैन । हाम्रो मुलुकमा गणतन्त्र आएको एक दशक भन्दा धेरै भै सक्दा पनि नागरिक र मुलुकको अवस्था हिँजोकै ठाउँमा छ । हामीलाई के भयो त गणतन्त्र आएर भन्ने नागरिकमा निराशा पैदा भयो भने यसले झन ठुलो असर गर्छ ।
थोरै समयमा पनि बिकशको चरम नमुना देखाएका मुलुकहरु देख्न पाईन्छ । सिंगापुर, कोरीया जस्ता मुलुकले छोटो समयमै समृद्धि हासिल गरेका छन् । तर हाम्रो देशमा भने गणतन्त्र आए पनि नेतृत्वहरु सत्ता परवर्तनको खेलमा मात्रै लाग्दा अवस्था जहाँको तहिँ छ । नागरिक र मुलुकको अवस्थामा परिवर्तन नआए सम्म व्यवस्था परिवर्तनको खासै अर्थ हुँदैन ।
Previous: शिक्षिका काफ्ले द्वारा आफ्नो जन्मदिनमा गुरुकुललाई सहयोग ।
Next: पुष्प धिरेन्द्र स्मृति प्रतिष्ठानले गरेको रक्तदानमा ३८ जनाले रगत दान गरे ।
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/पुष १/ नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ झापा ५ इकाइ समिति गठन ...
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/पुष १/ अमेरिकामा हुन लागेको तेस्रो “नेपाली फिल्म, म्युजिक एण्ड सोसियल अवार्ड २०१८” ...
तुलसा देवी न्यौपाने स्मृति शैक्षिक प्रोत्साहन पुरस्कार बाट दमक २ कम रहेको हिमालय माध्यमिक बिद्यालयका १० जना बिद्यार्थिहरुलाई पुरस्कृत
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर २८/ तुलसा देवी न्यौपाने स्मृति शैक्षिक प्रोत्साहन पुरस्कार बाट दमक २ कम ...
झापा गौरीगञ्जको बालकल्याण माविमा न्यानो कपडा र शैक्षिक सामाग्री वितरण साथै शिक्षक विदाई कार्यक्रम सम्पन्न
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर २८/ झापाको गौरीगञ्ज १ कुञ्जीबारीस्थित बालकल्याण माविमा आज दाताहरुको सहयोगमा सन्थाल बालबालिकालाई ...
भट्टराई कुल वंश प्रष्तिठानको उधौली गोठ पुजा सम्पन्न
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर २८/ भट्टराई कुल वंश प्रष्तिठानले आज उधौली गोठ पुजा सम्पन्न गरेको छ ...